Mpivarotra fahana voatafika : Latsaka ny basin’ireo jiolahy, matin’ny fitsaram-bahoaka ny iray…
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2016 → mai → 2 → Mpivarotra fahana voatafika : Latsaka ny basin’ireo jiolahy, matin’ny fitsaram-bahoaka ny iray…
Redaction Midi Madagasikara 2 mai 2016 0 Commentaire
Miverina mahazo vahana indray ao Toamasina ny fanafihana mitam-piadiana raha somary nangingina izany tao ho ao izay. Mpivarotra fahana tao Depot Manangareza no notafihan’ireo jiolahy telo nitondra PA iray ny herinandro nivalona iny, izay efa in-2 izao tamin’ity taona ity monja.
Raha ny fanazavana dia efa nandrasan’ireto andian-jiolahy telo mirahalahy ireto ny fodian’ireo mpivarotra fahana ity isaky ny hariva. Tampoka izay dia voaambana basy izy mivady hody. Nanana fahasahiana noho efa fanindroany nahavoa azy ireo amin’ny fanafihana toy izao ilay rangahy ka namaly ireto andian-jiolahy. Noho izay dia latsaka ny basin’ilay jiolahy nanambana azy ary raikitra teo ny antso vonjy ka tonga nanampy azy ireo ny fokonolona. Vokatr’izay dia tratran’ny fitsaram-bahoaka teo ny iray tamin’ireo telo lahy ka maty tsy tra-drano, ny roa lahy tafatsoaka kosa nitondra ilay paoketra noheverin’izy ireo fa nisy vola be, hay vola 400 ariary sy finday fampiasa amin’ny fivarotana fahana no hany tany anatiny. Misy ireo milaza fa basy na mpitandro filaminana ity nentin’ireo jiolahy manao fanafihana mitam-piadiana ity ; raha nanome fanazavana anefa ny teo anivon’ny polisim-pirenena misahana ny raharaha, dia nilaza fa basy natambatambatra ilay izy ka samy manana ny laharany avokoa ireo singa mandrafitra ilay basy PA nampiasain’ireo jiolahy latsaka nandritra ny sakoroka io.
Ankehitriny anefa, dia ireto notafihan’ireo andian-jiolahy ireto indray no rahonan’ny fianakavian’ilay jiolahy matin’ny fitsaram-bahoaka hovaliana faty aorian’ny fandevenana any amin’ny faritra Atsimo Andrefana fiavian’ilay jiolahy maty. Voatery nandray fepetra nifaranaka tamin’izay ihany koa ireto mpivarotra fahana ireto ho fiarovana ny ainy sy ny fananany…